YouTube Music Channels Dị Iche Iche Dị Artists, Genres na N'ókèala
Ị bụ nnukwu onye ofufe n'ihi na music? Ị na-aga YouTube na-ege ntị music ugboro ugboro? Ọ bụrụ na ee, ọ ga-abụ ihe adaba ọ bụrụ na ị denye aha na ụfọdụ music ọwa na-onwe gị emelitere na ọhụrụ music kwa ụbọchị. Ebe a bụ ụfọdụ YouTube music ọwa na-atụ aro na i nwere ike na-amalite na ka music-eme ka ụbọchị gị site ugbu a.
Best music ọwa nke 20 artists Music ọwa dị iche iche Genres Music ọwa mba dị iche iche
Best music ọwa 20 Artists
# 1. Miley Cyrus music ọwa
Nke a Miley Cyrus Music ọwa nwere ike na-enye gị na nke kacha mma songs na ihe niile oge mmasị hit songs nke nnọọ ewu ewu Miley Saịrọs. Ọ bụrụ na ị ụtọ nke na-ege ntị songs nke Miley Cyrus, mgbe ahụ, a Youtube Music ọwa bụ ebe kacha mma na-adị.
Gaa music ọwa >>
# 2. Justin Now music ọwa
Apụghị iguzogide mkpali na-ege ntị Justin Now si songs? Na-eche free gaa na nke a Youtube Music ọwa na ị ga-esi na-enwe ịtụnanya songs nke Now.
# 3. Taylor Swift music ọwa
Achọ ige oké songs nke Taylor Swift? Ọfọn, nke a music ọwa bụ maka gị! Ọ nwere niile na-ewu ewu songs nke Taylor Swift na ị na-apụghị nnọọ iguzogide.
# 4. Pink music ọwa
Ị na-akwado nke Pink na ya songs? Ọfọn, na-echegbu onwe ọzọ n'ihi na ị mfe nweta na-ege ntị ọtụtụ n'ime ya na-ewu ewu songs site na nke a music ọwa!
# 5. Mumford na ụmụ music ọwa
Mumford na ụmụ nwere ahụkebe songs niile ziri ezi. Ekele a music ọwa, gị ugbu a nwere ohere ha songs ekwe ka ị na kpamkpam ha ntị n'oge ọ bụla ị chọrọ.
# 6. Nicki minaj music ọwa
Na-ege ntị Nikki Minaj kasị ịrịba songs. Na-emelitere na ya ihe na ọhụrụ music releases mgbe ụtọ egwu music videos ebe ị pụrụ ịchọta na na YouTube
# 7. Katy Perry music ọwa
Nke a bụ gị ohere na-ege ntị ma na-ekiri Kacha ọhụrụ na mma music videos nke Katy Perry. Get a ndụ music egwu na-akpọ n'ụzọ nile na ya music ọwa.
# 8. Rihanna music ọwa
Nweta ihe kasị mma mmelite na Rihanna si music ọwa na ịchọpụta ihe ịtụnanya songs na music videos nke ọkacha mmasị gị artists. Ekiri niile Rihanna ọkụ music videos n'oge ọ bụla ị chọrọ.
# 9. Adele music ọwa
Na a music ọwa, ị na-ekiri videos na-ege ntị Adele si songs n'oge ọ bụla nke ụbọchị. Naanị YouTube music ọwa na-eweta a adaba ahụmahụ ị ga n'ezie hụrụ n'anya.
# 10. Michael Jackson music ọwa
N'ihi na uchu Fans nke Michael Jackson, ha pụrụ nanị ekiri si Michael Jackson music ọwa YouTube. Ekiri vidio egwú ị chọrọ n'oge ọ bụla nke ụbọchị.
# 11. Justin Timberlake music ọwa
Fọrọ nke nta 2.911.178 ndị mmadụ n'otu n'otu na-ama na subscribing a music ọwa YouTube n'oge. Ọ na atụmatụ ndị song "Ọ bụghị a ihe ọjọọ" nke bụ otu n'ime ndị ọhụrụ songs nke Justin Timberlake.
# 12. Drake music ọwa
Nke a music ọwa nwere 2.161, 155 debanyere aha na YouTube n'oge ugbu. Ndị ọhụrụ song ma ọ bụ music video na ike ga-egwuri ọ bụ "Kasị njọ omume."
# 13. Lil Wayne music ọwa
Nke a bụ a music ọwa YouTube na e dere niile music videos nke Lil Wayne. The video nke anụ tour akụkọ nke Lil Wayne dị na a music ọwa.
# 14. Lady gaga music ọwa
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na music ọwa na YouTube ebe niile nke kasị mma songs nke lady gaga dị. Ọ nwere 4.515.576 debanyere aha.
# 15. Beyonce music ọwa
The doro music video nke song nke a na isiokwu ya bụ "nkebi" site Beyonce dị na a music ọwa. Ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke ya debanyere aha bụ ugbua 5.026.933
# 16. Robin Thicke music ọwa
The music ọwa nke Robin Thicke-emi esịnede ya ochie na ndị ọhụrụ music videos. The Genres nke ọtụtụ n'ime ya songs bụ R & B, hip-iwuli elu na nkpuru obi.
# 17. Maroon 5 music ọwa
Nke a bụ ugbu a gị ohere ịnụ songs na-enweta na arụmọrụ nke maroon 5 na weghaara obi nke ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa.
# 18. Carrie Underwood music ọwa
Ọ bụ ugbu a gị ohere ịnụ dị ike na olu nke anọ oge American arụsị-eto eto. Carrie Underwood bụ, n'ezie, a ezi vasatail na-agụ egwú.
# 19. Avril lavigne music ọwa
Anụ olu na music nke avril lavigne ga-eme ka ị na-aghọta ihe mere ọtụtụ ndị na-eto eto ụmụ nwoke hụrụ ya n'anya music na songs.
# 20. One Direction music ọwa
The collection n'ime abụ One Direction ga-eme ka ị na-aghọta ihe mere na ha bụ otu ihe kasị mma, ma ama na-ekpo ọkụ ugbu nwata gbalaga iche iche na ọgbọ ọhụrụ.
MUSIC ọwa dị iche iche Genres
Oge gboo Music
Hip-iwuli elu Music
Ntụgharị uche Music
YouTube ọwa nke Country Music
Ụtọ nke na-ege ntị music na Country genre, mgbe ahụ, a music ọwa nwere ọtụtụ ihe na-enye. Ọ na atụmatụ oké mba songs na ị ga-n'ezie hụrụ n'anya!
# 2. Omuma Country Music
Nke a music ọwa awade oké mba songs nke na-ewu ewu na-abụ abụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ige ntị ụfọdụ soothing mba songs, mgbe ahụ, a music ọwa bụ ezigbo enyi gị.
# 3. ACM - Academy nke Country Music
Na-ekiri vidio ma na-a ọnụ ọgụgụ kasị elu banyere ndị ọhụrụ na ọnọdụ na-eme na ACM ma ọ bụ Academy nke Country Music. Ebe ị ga-esi na-a ọgụgụ kasị elu nke ruo ụbọchị videos!
Ọzọ na ndị ọzọ songs ga-uploaded a music ọwa. Na nke a, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ mba songs na ị na-apụghị ezute kwa ụbọchị!
A bụ ihe ọzọ magburu onwe music ọwa ebe ị nwere ike ịnweta oké mba songs nke dị iche iche na-abụ abụ na nka. Ị ga-enyerịrị mesmerized site na ndị a songs.
Ebe a, ị ga-ege ntị na-ewu ewu artists 'mba songs na ga-ewere gị ume pụọ. Nke a music ọwa ga-mgbe niile uploaded na gbara ọkpụrụkpụ songs na ị ga-achọ ka tinye gị playlist.
# 7. Country Ugbu a
Country Ugbu a music ọwa bụ ihe kasị mma. Nke a bụ gị otu nkwụsị ebe maka ndị ọhụrụ na oge a na mba songs na omenala. Ị kwesịrị ị na ịdenye aha niile oké ihe mba!
Ị na-ụtọ nke mba songs na ntụrụndụ? Denye aha na nke a music ọwa n'ihi ama mba music telivishọn videos. Ọ nwere ike na-enye gị oké videos na songs na ị ga n'ezie hụrụ n'anya.
# 9. Country Music Ahụmahụ
Nke a bụ ihe magburu onwe music ọwa n'ihi na ndị hụrụ mba music! Na-ege ntị songs si dị iche iche mba artists na ị ga-enwe afọ ojuju.
Chọrọ ịnụ ụfọdụ ezigbo mba na omenala mba music? Mgbe ahụ i kwesịrị ịdenye aha a music ọwa. Ị ga-ahụ a otutu oké mba songs na music si ebe a.
YouTube ọwa nke Jazz Music
N'ihi na ndị hụrụ Jazz music, ha pụrụ nanị gaa Jazz music ọwa YouTube. Na-eche free ele ndị kasị mma Jazz track videos mgbe na-ege ha egwu.
# 2. Jazz n 'Bad Ahụmahụ
Mgbe ị chọrọ ihe ịrịba Jazz n 'Bad ahụmahụ, YouTube music ọwa bụ ebe kacha mma na-aga. Ekiri ọzọ videos na n'ifè-òfùfè nile di iche iche nke Jazz music.
# 3. Houston Ezigbo Jazz / zuo ike Music Video si
Ekiri ihe ndị kasị ewu ewu Houston Ezigbo Jazz / zuo ike music videos ị mgbe hụrụ tupu. Enwe na ọkacha mmasị gị ire ụtọ na soothing Jazz dị ka ogologo oge ị chọrọ.
Chọrọ nweta ọzọ si EDolutionary? Na YouTube Jazz music ọwa, ị nwere ike inyocha a otutu ire ụtọ Jazz free si album "The soundtrack".
# 5. Obere Live
Enwe SmallsLIVE ya Jazz music ọwa site na mma nke gị n'ụlọ ma ọ bụ n'ebe ọ bụla na ị bụ. Ekiri dị ka ọtụtụ na-ewu ewu videos na ọtụtụ na-egwuri songs.
Platina Jazz ga-ewetara Ọkwọ Ụgbọ Mmiri Ọnwa - A Moonlight Serenade na i nwere ike na-ekiri ndị video na YouTube music ọwa. N'ihi na n'aka, ị ga-n'anya-ekiri ya n'elu na n'elu ọzọ.
# 7. DJ enyi Ịhụnanya - Cool Jazz
Na-ege ntị coolest Jazz mgbe na DJ enyi Ịhụnanya n'ebe a YouTube Jazz music ọwa. N'otu oge ahụ, wetuo mgbe na-ekiri ịtụnanya videos na nanị na nke a music ọwa nwere.
Ị bụ n'anya Jazz Fest? -Eche dị ka ị bụ otu n'ime ndị na New Orleans Jazz na Heritage ememme dị ka ị na-ele ya video on music ọwa.
# 9. A Ebe N'ihi Jazz & Ọzọ
Enwe a izuike na anụ-eji ire ụtọ Jazz music na na YouTube Jazz music ọwa. Ịchọpụta ọzọ ụdị nke Jazz music na ume ha mgbe na-ekiri videos.
Na JavaJazzFest music ọwa, ị ga-enwe ike-uru nke na-ekiri Java Jazz Ememme 2014 na-eche dị ka ị ghọrọ akụkụ nke ya.
YouTube ọwa nke Dance Music
Nke a bụ nke zuru okè music ọwa n'ihi na ndị mmadụ na-n'anya planet agba egwú music. O nwere ihe videos, mkparịta ụka, listi ọkpụkpọ na ole na ole nkọwa banyere Planet Dance Music.
Ọ bụ ihe ọhụrụ music ọwa YouTube nke nwere 1.458 debanyere aha. Otu nke ọhụrụ videos na pụrụ ịchọta ọ bụ music video nke song "akwụsịlata" site Selena akon.
# 3. Ị Hụrụ n'Anya Dance.TV
Na-ekiri ndị music video nke song "Karịa Enough" site Marc Korn site na ịga na music ọwa. Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na music video na YouTube na nwere ike anya na a music ọwa bụ "Kwụsị Time" site kụrie.
Na nke a music ọwa, ndị mmadụ nwere ike mgbe niile na-ekiri ihe ndị kasị rịọrọ music na mma videos nke agba egwú music site Marcellino. A free video mmụọ clip dị ugbu a na nke a music ọwa.
Ọtụtụ nsụgharị nke ọhụrụ kasị mma na-agba egwú music videos dị na a music ọwa nke YouTube. Kwa afọ, a music ọwa Uploads ọhụrụ kasị mma na-agba egwú music videos na mmadụ n'ụwa a na ga-ahụ.
Nke a music ọwa na-ama na-akwalite ọhụrụ music video nke Rosario Flores nke e isiokwu El Niño De The Ojos. Ọtụtụ iche iche nke music vidiyo na-nwere remix n'omume ndị dị na nke a music ọwa.
# 7. Electronic agba egwú music - Topic
Ọtụtụ iche iche nke electronic egwú ndị dị na a pụrụ iche music ọwa. Otu n'ime music videos na dị na nke a music ọwa bụ New Best Dance Music 2014.
Chọpụta ndepụta nke kasị mma n'ụlọ songs maka afọ a site na-eme nchọgharị na nke a music ọwa nke YouTube. The music video nke Top House-Dance Songs dị ebe a.
# 9. Urban naa mara ụlọikwuu
Nke kasị mma nke Urban Dance Camp videos dị na a music ọwa. Ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke ya debanyere aha n'oge ugbu bụ ugbua 338.311.
Nke a na-ewere dị ka ndị kasị ibu electro ụlọ music ọwa na ụwa a n'oge ugbu. Na nke a music ọwa, ndị mmadụ nwere ike na-ekiri ndị music videos nke ụwa si ama djs na na-akwalite electro ụlọ music.
YouTube ọwa nke oge gboo Music
# 1. Oge gboo music - Topic
Ndị kasị mma na kasị bara uru music videos banyere oge gboo music dị ebe a. Ọ bụ nke zuru okè music ọwa maka music ụmụ akwụkwọ bụ ndị nwere mmasị na-egwu ọtụtụ ihe atụ nke oge gboo music na ngwá egwú.
Otu nke kasị mma music ọwa na YouTube na-akwalite oge gboo music. Ọ nwere 3.448 debanyere aha n'oge ugbu. Ndị mmadụ pụrụ ịnụ ụtọ music videos nke kasị mma oge gboo music iberibe Fernandes na ndị ọzọ na ama egwú n'oge gara aga na a music ọwa.
# 3. Oge gboo Music
Ndị ọzọ ụdị music dị na a music ọwa nke YouTube. Ma ọtụtụ n'ime ya music videos na-metụtara Jazz ka "Sweet Mama" nke Joe Lovano na Ed Thigpen.
# 4. Contemporary oge gboo music - Topic
Na nke a music ọwa, ndị kasị ewu ewu dịkọrọ ndụ oge gboo music videos dị na inweta maka onye ọ bụla. Na-ege ntị dị iche iche ihe atụ nke piano music site mmeghe a music ọwa YouTube.
# 5. Oge gboo Music
The music video nke ama Antonio Vivaldi anọ kara dị na a music ọwa. Ndị oge gboo music ndekọ a na music ọwa bụ mgbe na zuru HD na elu àgwà.
# 6. Mọ nke Oge gboo Music
Nke a bụ ihe kasị mma music ọwa maka ndị na-amasị oge gboo music. Ọ nwere ike na-eto eto na mụbaa ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ya debanyere aha ga-pịa ka na òkè buttons na ya interface.
# 7. Oge gboo music ọwa
The music videos maka olu nwere na Wiener Walzer dị na a music ọwa. Ndị mmadụ nwekwara ike na-enweta music nke ndị eze ezimezi oku a na music ọwa.
# 8. Oge gboo Music
Ihe nlereanya kasị mma nke symphonies dị na music videos nke a music ọwa. The rụzuru nke kasị ukwuu Baroque-arọ na n'oge gara aga ndị dịnụ ebe a.
Ọtụtụ ihe atụ nke piano music iberibe na-gụnyere site music videos nke a music ọwa. Ndị kasị mma iberibe Fernandes na Mozart nọ na ịnakọta nke a music ọwa.
Ndị mmadụ na-atụle nke a dị ka ọnụ ọgụgụ otu music ọwa n'ihi na oge gboo music na YouTube n'oge ugbu. Ndị kasị mma iberibe Claudio Abbado na ihe kasị egwú Portraits na-gụnyere ke ọhụrụ collections nke a music ọwa.
YouTube ọwa nke Hip-iwuli elu Music
# 1. RAP & Hip-iwuli elu
Ị bụ RAP na hip-iwuli elu music ịnụbiga ọkụ n'obi ókè? Mgbe ahụ, n'iji ya gee ntị na nke a RAP & hip-iwuli elu music ọwa ga-zuru okè n'ihi na gị n'ihi na ị ga-enwe na-ege ntị nke a eze genre.
# 2. A-ONE HIP-iwuli elu MUSIC ọwa
-Emelitere na coolest a-otu hip-iwuli elu music ọwa. Ị ga-a n'anya music ọwa karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye uchu ofufe nke music n'okpuru nke a na ụdị genre.
# 3. HipHopMusic - All ụbọchị
Apụghị iguzogide ọchịchọ gị na-ege ntị nke a na ụdị hip iwuli elu? Mgbe ahụ, ị ​​na-adịghị mkpa na-echegbu onwe n'ihi na ị ike mfe nweta ụdị genre site na nke a music ọwa.
# 4. Nọ nke Hip-iwuli elu
Enweta ihe ohere a Hip-iwuli elu music site na nọ nke Hip-iwuli elu music ọwa na-enwe nke a na-ekpo ọkụ music. Ị ga-a n'anya ọwa ọ bụrụ na ị a ezi hip hop ịnụbiga ọkụ n'obi ókè.
# 5th FREETraffic Hip-iwuli elu
Ike gwụrụ nke na-ege ntị ụfọdụ na-agwụ ike ụdị music? Ọ bụ ugbu a oge gị na-ege ntị na-ekpo ọkụ ụdị music na ike n'ezie enwetaghị gị ntị ma na-abụ ihe uchu ofufe nke Free Traffic Hip-iwuli elu.
# 6. WorldStar Hip iwuli elu
-Akpali mmasị na-emelitere na ọhụrụ na coolest songs na Hip-iwuli elu music ụlọ ọrụ site n'iji ya gee ntị na World Star Hip iwuli elu Music ọwa.
-Emelitere na vidio egwú, na songs nke HipHop Since1987TV site na music ọwa nke HipHop Since1987TV. N'ezie, ị ga-itu n'anya na mmasị na nke a na ụdị music.
# 8. Marpha HIP-iwuli elu
Igbu gị ahuokika site na-ege ntị ma na-ekiri ka music na songs nke Marpha Hip-iwuli elu Music ọwa. Na-ege ntị nke a na ụdị songs ga-eme ka gị na ụbọchị na-ekpo ọkụ na-akpụ akpụ.
Mgbe ịnapụ onwe gị si na-ele ihe na ige ntị music videos na ike n'ezie ịtọ gị na ọnọdụ na mma. Enwe music nke Hip-iwuli elu site na OldSchoolHipHopHD music ọwa.
Enweghị mmasị n'ihe nwere ike ime ka ị na-eche na-adịghị emepụta na owu na-ama. Amalite ụbọchị gị site n'ige ntị ma na-ekiri vidio egwú nwere ike ime ka ụbọchị gị mma. N'ezie, ị ga-ọma na ọnọdụ na njikere jijiji ụwa.
MUSIC ọwa mba dị iche iche
Music Channels si: China Ethiopia India Russia Thailand Ọzọ na-abịa
Download vidiyo si na 100+ saịtị, gụnyere YouTube, Vimeo, Dailymotion na ọtụtụ ndị ọzọ. Ke adianade do, ị pụrụ iji ya iji tọghata gị videos na na na ọ bụla obere ngwaọrụ na media egwuregwu.
MEGODỊ IT FREE maka Windows MEGODỊ IT FREE N'ihi na Mac
Music Channels nke Chinese Music
# 1. CCTV Chinese Music ọwa
Dị iche iche nke Chinese music genre dị na music videos nke a music ọwa. Nke a bụ a music ọwa n'ihi na ndị ndị chọrọ na-achọpụta na ebube nke Chinese music.
Dị iche iche nke oge gboo music na omenala music iberibe na China na-gụnyere site music videos nke a music ọwa. Chinese piano music na ọjà music ndị dịnụ ebe a.
Ndị kasị mma Chinese music iberibe bụ ugbu ke interface nke a music ọwa. The music videos nke ndiife songs na China na-embodying na Chinese omenala music ndị dịnụ na nke a music ọwa.
Na nke a music ọwa, na omenala Chinese music-ewere dị ka ụdị nke ntụrụndụ music. The iche iche iche iche nke omenala na oge a na Chinese music bụ ugbu a na music ọwa.
Ọtụtụ ihe atụ nke Chinese-ịke music iberibe na songs dị na music videos nke a music ọwa. Ọ nwere 14.618 debanyere aha n'oge ugbu.
Music Channels nke Indian Music
Na-ege ntị ihe ndị kasị soulful Indian ịhụnanya songs na Sony Music India music ọwa. Plus, ị na-ekiri dị iche iche music videos na vidiyo nke ọkacha mmasị gị songs.
Chọpụta niile ewu Indian songs na India Music Network ma na-eche free na-ekiri ihe videos na ya music ọwa YouTube, n'elu music ọwa na ụwa.
Mụta ihe nke dịkwa videos na SonyMusicIndiaVEVO Music ọwa. Ele ihe videos na-ege ntị ka ndị ọhụrụ na Hits ị nọwo na agụụ ịnụ.
Na-ekiri ndị kasị mma MTV Indies na MTV India music ọwa. Nke a bụ zuru okè n'ebe maka ị na-ekiri ndị kasị mma na ọhụrụ MTVs na akụkọ ihe mere eme.
N'ihi na ihe Vijay Kannan listi ọkpụkpọ, YouTube music ọwa nwere ike inye ihe niile ị chọrọ. Na-emelitere na ndị kasị ewu ewu music uploads maka na-eche n'echiche na nsụgharị dị iche iche.
Ekiri Universal Music India ọwa ụgbọala na-adọkpụ ma na-juru na coolest Hits na ndị ọzọ na trailers dị na a music ọwa. -Atụ anya ihe si ọkacha mmasị gị artists.
Na nke a Indian music ọwa, ị nwere ike ige ntị ma na-ekiri Badhawa Shehnai instrumental song site Kailash Rana. Nke a Indian oge gboo doo a dị ịrịba ama song na unu ga-hụrụ n'anya.
Na-ekiri ndị kasị mma na-agba egwú film nke India isiokwu Aagayam Polave ​​- Aadalam Boys Chinnatha Dance. Na GreenMusic360, ị ga-aghọta ihe songs na egwú ị dịghị ama n'ihu.
Get masịrị na mmụọ nsọ site kasị mma Indian music na ị n'anya n'ezie n'obi. Nke a bụ kacha ebe maka ntụrụndụ na zuru ntụrụndụ.
# 10. All Indian djs Music
Site All Indian djs Music, ị na-ekiri na-ege ntị dị iche iche hit songs na vidiyo n'oge ọ bụla ị chọrọ. Nke a music ọwa na-eweta àgwà music na vidiyo maka onye ọ bụla.
Music Channels nke Etiopia Music
# 1. Etiopia Music
Nke a music ọwa uploads ewu ewu Etiopia songs si dị iche iche artists. Ya mere, ọ bụrụ na ị ụtọ nke songs na nke a genre, jide n'aka na-denye aha na nke a ọwa.
# 2. Lucy Etiopia Music
Lelee a music ọwa na ịhụchalụ ike ịhụ na ọhụrụ songs si Ethiopia. Nke a music ọwa showcases di iche iche nke ndị mara mma mba, nakwa dị ka ndị mara mma songs na ha nwere ike na-enye.
# 3. Obi ụtọ na Etiopia
Achọ ige oké obi ụtọ, Etiopia songs? Ị na-abịa nri ebe. N'ihi na ihe mmelite maka ọhụrụ uploads nke Etiopia music, niile ị chọrọ bụ ka ịdenye aha!
Nke a music ọwa nwere ọtụtụ ihe na-enye mgbe ọ na-abịa Etiopia music na ọhụrụ songs. Ị ga-enwe na-achọpụta onye nke ụdị song si Ethiopia!
Ị na-achọghị ka uche ndị dị iche iche videos na songs site na nke a music ọwa. Enwe ihe niile Etiopia a ọwa na-esi nweta oké songs si oké artists.
# 6. Etiopia TV
Mgbe ọ na-abịa Etiopia ntụrụndụ, a music ọwa bụ ọkachamara. New videos na-uploaded kwa ụbọchị otú ị ga-ekiri elu maka mmelite!
Ị Aga mgbe chọrọ ịkwụsị na-ege ntị songs site na nke a music ọwa. Ị n'ezie na-LSS ndị a Etiopia songs - songs na unu adịghị ezute kwa ụbọchị!
# 8. Etiopia Music ọwa
Nke a music ọwa bụ ihe niile banyere Etiopia; igbo onwe gị na n'ịnọgide songs si Ethiopia. Denye aha na ị ga-emelitere na songs si Etiopia Music ọwa.
Nke a music ọwa na-aghọ ihe na ọzọ na-ewu ewu na nke a bụ n'ihi na nke ịtụnanya Etiopia songs na ọ atụmatụ. Na-ege ntị ndị a songs na ị ga mgbe akwa ụta na ya!
# 10. Etiopia Music
Ya mere, na-achọ ndị kasị mma Etiopia Music ọwa ebe ị pụrụ ige ntị na n'elu nke akara Etiopia songs? Ọfọn, i kwesịrị ịtụle Etiopia Music dị ka otu n'ime gị mma nhọrọ!
Music Channels nke Thai Music
# 1. Ọwa [V] Music Thailand
-Akpali mmasị ọkacha mmasị gị ọgụ egwu na ha songs. -Emelitere ka ọhụrụ na kacha ekpo ọkụ ugbu music na Thailand music ụlọ ọrụ. Amalite ụbọchị gị na-ekpo ọkụ site n'iji ya gee ntị ka ọwa [V] Music Thailand.
# 2. Rihanna music ọwa
Ị bụ onye uchu ofufe nke dị iche iche nke music? Ọ bụ ugbu a oge gị ka ịnweta site na Bec Tero Music ọwa ị ga--emelitere ndị ọhụrụ na coolest songs.
Ekiri na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị music, ọgụ egwu na ha songs site na Warner Music Thailand Music ọwa. Ị ga-eche Ịnọ nkịtị gwụrụ mgbe na-ekiri na-ege ntị niile music vidiyo na a music ọwa.
Tinye agba na obi ụtọ na ndụ gị site na-ekiri ma na-ege ntị egwú nke ọkacha mmasị gị nka na ha songs. Ị ga-emelitere ndị ọhụrụ na coolest song na music ụlọ ọrụ site n'iji ya gee ntị na Umusicthai music ọwa.
# 5. ọwa [v] music Thailand
Mee ka gị na ụbọchị egbuke egbuke ma na ọmarịcha site n'ige ntị ma na-ekiri dị iche iche music videos na ike itinye ọnụ ọchị gị ihu. Site na ọwa [V] Music Thailand ị na-ekiri na-ege ntị egwú gị dị iche iche artists.
Music Channels nke Russian Music
# 1. Russian Music chaatị dị iche iche
Kwụsị gị ahuokika na nwee ezigbo oge na-ege ntị ma na-ekiri ọhụrụ music videos nke ọkacha mmasị gị artists. Akụ na na Russian Music chaatị dị iche iche.
Ị bụ onye uchu ofufe nke music? Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-ekiri ma na-ege ntị ọhụrụ na kacha ekpo ọkụ ugbu Russian music videos ahụ ga-esi uzo site na Hot Russian Music.
# 3. Ụzụ na ibuo Music na Russia
Ịnụbiga ọkụ n'obi ókè nke Noise na ibuo Music ga-n'anya n'iji ya gee ntị ka music ọwa nke Noise na ibuo Music na Russia. Mee ụbọchị gị site na-ege ntị ọkacha mmasị gị songs site na nke a ọwa.
Ị ga-eche ahuokika ọ bụrụ na ị na-akụ na na Russian Indie Music ọwa. Mee ka gị na ụbọchị na-akpali akpali site na-ege ntị ma na-ekiri ọkacha mmasị gị music videos.
# 5. shuminfo Russian Indie music
Hụbara n'anya na nkume gị ụwa site n'ige ntị ma na-ekiri ndị shuminfo Russian Indie music ọwa. N'ezie ụbọchị gị ga-enwe mgbe nile na-ekpo ọkụ na-akpali akpali.
> Resource> YouTube>-atụ aro YouTube Music ọwa Dị Iche Iche Dị Artists, Genres na N'ókèala